Tatitra vaovao manasongadina ny fitohizan’ny tsindry mitohy mahazo ireo Okrainiàna mpikatroka sy mpiaro zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Mbola manalasala ny satan'ny fahalalahana sivily sy zon'olombelona ao Okraina.
Voadika ny 04 Jona 2021 8:18 GMT
Vakio amin'ny teny українська, русский, English, Español, polski, Ελληνικά, Esperanto , Français, English
Diaben'ny Vehivavy, Okraina 2019, tao Kiev, Okraina. Sary an'ny UN Women/Volodymyr Shuvayev tao amin'ny Flickr, CC BY-NC 4.0.
Tao anatin'ireo taona vitsivitsy nanaraka ny savorovoro goavana sivily sy pôlitika, nahavitra dingana kely i Okraina tamin'ny famakiana bantsilana ireo kolikoly sy ny fampidirana ho anaty sehatry ny nomerika ireo tolotra avy amin'ny fanjakàna ho an'ny daholobe, na dia nisy aza ny sakàna vitsivitsy teny am-pandehanana teny. Na teo aza ireny fahombiazana ireny, mbola mampisalasala ny sata misy ny fahalalahana sivily sy ny zon'olombelona ao amin'ilay firenena.
Ifantohan'ny tatitra iray vaovao fanarahamaso avy amin'ny ZMINA Human Rights Center, ireo fanenjehana misy amin'izao fotoana izao manjo ireo mpikatroka sy mpiaro zon'olombelona any amin'ny ampahany ambany fifehezan'ny governemanta ao Okraina. Voaboasan'izy io ireo fironana fototra, ary asongadiny ireo tranga-na tsindry tena nalaza tamin'ny fampahalalam-baovao nahazo ny fiarahamonina sivily tamin'ny Janoary-Martsa 2021.
Marihan‘ilay tatitra, niarahana namolavola tamin'ny Kaomity Helsinki avy any Pays-Bas ary novatsin'ny Fiombonambe Eorôpeàna vola, fa 30 ny fitambaran'ireo trangam-panenjehana noho ny hetsika sivika voarakitra nandritra ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, raha tranga 26 izany tamin'ny taona lasa, ho an'io vanimpotoana mitovy io.
Ao anatin'ny toedraharahan'ny fanapariahana, ny fanetsehana ireo ezaka firaisankina hiadiana amin'ny voka-dratsin'ny valanaretina COVID-19, lasa miha-manandanja ho entina mampiroborobo sy mampanaja ny zon'olombelona ary hiarovana ny tombontsoam-bahoaka izao ireo fikorontanana sôsialy sy ara-toekarena, ny resaka fanenjehana mpikatroka sy mpiaro zon'olombelona, ary hatramin'ny tsimatimanota amin'ny fanenjehana tahaka izany.
Isan'ireo fandrahonana tena manjo ireo mpikatroka ao Okraina ny herisetra ara-batana, fahasimban-panànana sy fandemena. Kisary avy amin'i ZMINA, pikantsary nalaina tamin'ny Monitoring Report tao amin'ny zmina.ua.
Tanatin'ireo tranga niseho nandritra ny telovolana tapany voalohany ho an'ny taona 2021, ny tena natetika indrindra dia ireo herisetra ara-bàtana, ny fanimbàna fanànana na ny toeram-ponenan'ireo mpikatroka, ary ny fanandramana fampitahorana (tranga enina isaky ny sokajy tsirairay). Fanampin'izany, ZMINA dia naharakitra tranga dimy amin'ny fampielezankevitra fanalàna baraka, andrana telo hanelingelenana fihaonana am-pilaminana, tranga roa tamin'ny fanenjehana eny amin'ny fitsaràna, tranga iray amin'ny fanohintohinana fiainana manokana ary tranga iray tamin'ny fisavàna tsy misy fototra araka ny lalàna.
Hetsika toy inona no tena mampidi-doza indrindra? Kisary avy amin'i ZMINA, pikantsary nalaina tamin'ny Monitoring Report tao amin'ny zmina.ua.
Marihan'ilay tatitra ny sasany amin'ireo hetsika tena mampidi-doza anenjehana ireo mpiaro zo noho ny asa nataony mifandray amin'ny ady fanoherana ny kolikoly, ny zon'ny LGBTQ ary ny zon'ny vehivavy. Trangam-panenjehana telo isaky ny sokajy no voamariky ny ZMINA, eken'ny mpanoratra fa “sarotra ny hamaritana ho mampidi-doza kokoa ny hetsika iray ataon'ireo mpikatroka” satria matetika no mifanitsaka izy ireny. Naharaketana tranga iray tsirairay avy ny fanenjehana mpikatroka, ny fanoherana ireo fanorenana tsy ara-dalàna, ny fiarovana ny tontolo iainana, fanohanana sy fiarovana ny zon'ny marary, ary ny fiarovana ny zon'ireo mpanao gazety.
Voalazan'ilay tatitra ihany koa ny momba ireo fandrahonana nomerika atao an'ireo mpikatroka sivika sy mpanao gazety. Nandritra ny telo volana voalohany ho an'ny taona 2021, tranga 25 tsy misy ifandraisany no voarakitry ny Digital Security Lab, fikambanana iray mpiaro ny zo nomerika ary tsy mitady tombony ara-bola ao Okraina, izay manara-maso ny karazana tranga tahaka izany sy manome fanohanana ho an'ireo iharany: enina tamin'ny Janoary, roambinifolo ny Febroary ary fito ny Martsa.
Fipaingorana am-pitaka niisa 10 no voarakitr'ilay fanarahamaso (ny iray tamin'izany dia ilay nidadasika be natao tao amin'ny Telegram tamin'ny Janoary); trangam-pangalarana fito, famerenana hatrany am-boalohany na fampiasàna ny fanalahidin'ny kaontin'ireo mpikatroka; tranga telo nahakasika fipaingorana hafatra an-tsoratra (fampiasa matetika hialàna amin'ireo fanamarinana mandalo ambaratonga roa), tranga roa tamin'ny fijirihana tranonkala, ary hatramin'ny fibahanana votoaty na fibahanana nandritra ny fotoana voafetra ny kaonty teny anaty tambajotra sôsialy. Marobe ihany koa ireo mpikatroka no nandefa tatitra ho naharay hafatra mampitahotra na fandrahonana tamin'ny alàlan'ireo fantsona nomerika.
Fa iza no tena loza mitatao ho an'ireo mpikatroka ao Okraina?
Singanin'ny tatitry ny ZMINA ireo mpisehatra fototra marobe mitàna toerana amin'ny fibahambahànana ny asan'ireo mpikatroka sivika sy ireo mpiaro zon'olombelona. Hita anatin'izany ireo mpanao lalàna miady hevitra na mandàny lalàna manavakavaka ny fiarahamonina sivily, ohatra,, ireo tolodalàna mampitovy ny fandresena lahatra sy ny fisoloana vava, mampiditra fomba fanondro avy any Rosia toy ny hoe “olon'ny firenena vahiny”, na mandrahona ny zo ho afaka manao fivoriana am-pilaminana sy ny fahalalahana hanangana fikambanana. Maro ireo tranga ao anatin'ilay tatitra no miresaka momba ny fampiharana ireo lalàna sy, indrindra indrindra, ny setry tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataon'ireo mpitandro filaminana rehefa misy famoriambahoaka am-pilaminana.
Misy ihany koa tatitra marobe momba ny tsindry avy amin'ny fitsaràna, avy amin'ireo mpampanoa lalàna na olon-tsotra, dia ireo fanadihadiana sy fitsaràna raharaha ady heloka atao malaza be mahatafiditra ireo mpiaro zon'olombelona sy mpikatroka sivika. Etsy ankilany, asongadin'ireo mpikaroka ny tsimatimanota sitrahan'ireo nanao ireny fanafihana mpiaro zo ireny: mbola tsy nahitàna valiny hatramin'ny taona maro ireo fanadihadiana ela be momba ireo tranga malaza marobe nanafihana ireo mpikatroka (toa an'i Kateryna Handzyuk na Iryna Nozdrovska, izay samy namoy ny ainy).
Nilaza tamin'ny fampielezampeom-pirenena, Hromadske Radio, i Anastasia Moskvychova, iray amin'ireo mpanoratra tao anatin'ilay tatitry ny ZMINA, fa ny tsimatimanota no mipetraka ho sakana iray goavana ho an'ny asan'ireo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona ao Okraina.
Amin'izao fotoana izao, mahasarika bebe kokoa ny saina ny fanafihana atao an'ireo mpikatroka, izay angamba manazava ny antony mampitombo ny isan'ireo tranga. Saingy mahaketraka raha ny antontanisa.
Mino i Moskvychova fa tena zavadehibe tokoa ny fanentanana momba ireo loza mitatao sy ny fanakantsakànana ny asan'ireo mpikatroka ao Okraina, satria “ny tanjon'ireo fenenjehana dia ny hampanginana ireo mpikatroka ary hisarihana azy ireny hampitsahatra ny asany”.
Vakio manontolo ato ny tatitra farany avy amn'ny ZMINA.